ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ မြန်မာပြည်သို. ပေးစာများ ၆ ~ pyidawoo
မြန်မာပြည်သို. ပေးစာများ ၆
7:27 AM Pyidawoo No comments
(၃-၁၈-၁၁ နံနက် ၉နာရီ၃၆မိနစ် )
(ဓမ္မယာန) မဇ္ဈိမယာန အဖွဲ.သူ/သားများသို.
ဒီနေ.တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ပို.လိုက်တဲ့စာပါ ပညာရေးအကြောင်းကိုပဲ ဆက်ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် Why? ဘာကို What? ဘယ်လို How? သင်ကြား/ယူကြမလဲဆိုတာလေးပေါ့။
Why? ကမ္ဘာ့ကြီး ပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် ကလေးတွေကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသိပေးမှဖြစ်မယ်။
What? မြေရေလေထု ညစ်ညမ်းမှု/ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်/ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု/ဝင်ရိုးစွန်းရေခဲပျော်/ အိုဇုန်းလွှာ /အဏုမြူအန္တရာယ် စသည်အကြောင်းကို..,
ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်လျှော့ချဖို. သစ်ပင်ကိုချစ်အောင် တန်ဖိုးထားအောင် သင်မယ်ဆိုပါစို.။
How? ပညာရှင်တွေလို စာတမ်းဖတ်ပွဲ လုပ်မလား။ အခု ကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်သလို (ကျောင်းသူ/သား အများစုကတော့ သိဖို.ကျင့်ဖို.မလို ပါတာဖတ်နဲ. ခိုးနည်းကားသာလို ဖြစ်နေတာမျုိး)သင်မလား။
ဒါမှမဟုတ် တို.ကွင်းထဲမှာ ကလေးတွေနဲ. ဆော့ရင်း ကစားရင်း---
အမလေး နေပူလိုက်တာ။ အသားတွေ လောင်နေပြီ။ ဘယ်လို.လုပ်မလဲ။ သစ်ပင်အောက်သွားရအောင်… ဟာ အေးမြသွားတာပဲ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ သစ်ပင်ကြီးရယ် သစ်ပင်ကြီးက တအားချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ (သူ.ကိုခုတ်တဲ့သူကိုတောင်မှ စိတ်မဆိုးဘူး။) စားစရာတွေလည်းပေးတယ် အရိပ်လည်းပေးတယ်။ နေစရာလည်း ပေးတယ်။ (သင်နေတဲ့ ဆရာကိုယ်တိုင်က တကယ်မချစ်ဘဲနဲ. ကလေးတွေကိုချစ်အောင်သင်လို. ဖြစ်နိူင်ပါ့လား?) ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မဟုတ်ဘဲ (ကလေးတွေရှေ့မှာ သစ်ပင်ကို အားရပါးရဖက် မွှေးမွှေးပေးလျက်း) ) သစ်ပင်ကြီးကို သိပ်ချစ်တယ် အသံကုန်ကြုံးအော်။ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာမက အသက်ရှည်ပြီး တို.ကို အေးမြတဲ့ အရိပ် ပေးပါစေ။ ခုတ်မယ့် ထစ်မယ့် လူဆိုးကြီးတွေနဲ. မတွေ.ပါစေနဲ. စသည်စသည် စိတ်ထဲပေါ်သမျှ ရိုးရိုးသားသား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြော။ ကွင်းတဲမှာ ပူပြီး ဒီရောက်လာတော့ အေးသွားတာ ဘာလို.လဲ စဉ်းစားခိုင်း။ ချဲ.ပြီး ကမ္ဘာကြီးရဲ. သစ်ပင်နည်းတဲ့ အပိုင်းနဲ. များတဲ့ အပိုင်းနဲ. (ဖြစ်နိူင်ရင် ကန္တာရနဲ. သစ်တောပုံ ဗွီဒီယိုစသည်သုံး)
သစ်ပင်များတဲ့ ပန်းခြံ စသည်သွားပြီး လေကလေးက လတ်ဆတ်လိုက်တာ လန်းဆန်းလိုက်တာ။ တို.ကွင်းထဲနဲ. မတူဘူးနော်။ ဘာလို.ပါလိမ့်။ ကနေစပြီး ကလေးတွေ သစ်ပင်ချစ်/ထိန်းသိမ်းချင်/ စိုက်ချင်စိတ် ပေါက်လာ လက်တွေ. အတူစိုက်ကြတဲ့ အထိ စသည် စသည်ဖြင့် လက်တွေ. ဘဝထဲရောက်အောင် သဘာဝနဲ. ဟပ်ပြီး သင်မလား။
ချုပ်လိုက်ရင် ဘယ်သူ.ကိုပဲသင်သင် Why? နဲ. What? က မပြောင်းပေမယ့် How? Teaching method က အမျိုးမျုိး ပြောင်းနိူင်ပါတယ် ပြောင်းရပါမယ်။ ဥပမာ (ဘာကြောင့်) ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗီတာမင် စီ လိုအပ်သောကြောင့် (ဘာကို) ဗီတာမင် စီ/ သံပုရာသီး စသည်ကို (ဘယ်လို) အလုံးလိုက်/ ဖျော်ရည်ဖျော်၍/ အသုတ်တွင်ညှစ်ဆမ်း၍ ကစီဓါတ်အတွက် အားလူးစားရမယ်ဆိုပါစို.။ အစိမ်းကျွေးမလား။ ဖုတ်ကျွေးမလား။ သုတ်ကျွေးမလား။ ချက်ကျွေးမလား။ အာလူးထမင်းနယ် လုပ်ကျွေးမလား စသည်စသည် အများကြီး ကွဲပြားနိူင်ပါတယ်။ ဘယ်အပေါ် မူတည်လဲ?
ဘယ်သူ.ကို သင်မှာလဲ ဆိုတာပေါ်မှာပေါ့။ လူအိုနဲ. ကလေးကို သံပုရာသီး အလုံးလိုက် ကိုက်စားခိုင်းမယ် ဆိုပါစို.။ ဘာဖြစ်နိူင်လဲ။ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက် ပေါက်ဖို. လွယ်မလား။ ဘယ်လို စားခိုင်းရင် အဆင်ပြေမလဲ။ ဒါပါပဲ။
ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် လိုရင်ဖြည့် ပိုရင်နှုတ် မှားရင်ပြင်ပြီး လက်တွေ.လုပ်ငန်းခွင်မှာ သုံးနိူင်ကြ ပါစေ။ သိပြီးသားသူများအတွက် မဟုတ်ပါ။ လုပ်ချင်ပေမယ့် ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း မသိလို.ဆိုတဲ့ ဘဝတူများအတွက် အခြေခံ သတင်းအချက်အလက် မျှဝေမှု သက်သက်ပါ။
စကားချပ်အနေအားဖြင့် Why? What? How? ကို ကိုယ့်ဘဝနဲ. ယှဉ်ပြီးတော့လဲ ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ဆွေးနွေးကြစေချင်ပါတယ်။
Posted in: မဇ္ဈိမယာန အဖွဲ.ဆိုင်ရာ,ပေးစာများ
ဘုရားအနေကဇာတင် (မိဘမေတ္တာ - ကင်မ်ဟဲ)
သမီးလေး ၄၅ရက်ပြည့် မွေးနေ. ကုသိုလ်
ဓမ္မစင်္ကြာသင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ် ပို.ချ
၁၃၇၃ခု မြန်မာ နှစ်ဥိး နှစ်သစ်ကူး တရားပွဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရနှင့် ဝိပဿနာ သင်တန်း အပတ်စဉ်(၃)
မြန်မာပြည်သို. ပေးစာများ ၅
မြန်မာပြည်သို. ပေးစာများ ၎